Zimbabwe Inopinda Muzuva reChina Nyika Yakavharwa, Asi Vanhu Vachinyunyuta
Zimbabwe yapinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwehutachiwana weCoronavirus, veruzhinji vari kutadza kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere cheCoronavirus, dzakaita sekusagara pedyo nepedyo kana kuti Social Distancing, sezvo vari kugara vachitsikirirana mumitsetse yekuchera mvura pazvibhorani pamwe nekutenga zvinhu zviri kushaikwa zvakaita sehupfu muzvitoro.
Pasi rose vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere ichi, kusanganisira vasere vemuZimbabwe, uye vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nechimwe, vafa nechirwere ichi kusanganisirawo Zororo Makamba wemuZimbabwe.
Vakawanda pamwe nemapurisa akawanda ayo ari kuona kuti vanhu vatevedza mutemo wekuti vagare kudzimba dzavo, havanawo zvipfeko zvinovadzivirira kubva kuCoronavirus zvakaita semamasiki.
Pavakaparura chirongwa chekuti vanhu vagare kumba, mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakavimbisa kuti hurumende ichaona kuti vanhu vawaniswa mvura kuti vakwanise kugeza nekugara kudzimba dzavo kuti chirwere cheCoronavirus chisapararira.
Asi mumwe mugari wemuHarare, VaThomsen Lizwe, vanoti izvi handizvo zviri kuitika sezvo vanhu vari kuungana kuzvibhorani nekuti hakuna mvura iri kubuda mupombi.
Vamwewo vakawanda varatidzawo kusafara nekuti zvitoro zvikuru zvakavhurwa zvakaita seOK, mumisha inogara vazhinji, kune mitsetse yakakura sezvo vanhu vari kuda kutenga hupfu nechikafu.
Panzvimbo idzi vanhu havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kuparara kweCoronavirus.
Mumiriri weMufakose muNational Assembly, Amai Susan Matsunga, vaudza Studio7 kuti vanoona sekuti vanhu vanogona kutevedza mitemo yekudzivirira kupararira kweCoronavirus kana vakapihwa mvura mudzimba kuitira kuti vasanoungana kuzvibhorani.
Asi mutauririri weHarare Council, VaMike Chideme, vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo yave kutora matanho ekupa vagari mvura pamwe nekuona kuti havaungani zvichitevera mutongo wakapihwa nedare repamusoro nemusi weMuvhuro.
Dare iri rakati kanzuru yeHarare nehurumende kuburikidza nemapazi aro anoti remadhorobha nematunhu neremari anofanira kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena muguta reHarare panguva ino apo nyika iri kudzivirira kupararira kweCoronavirus.
Mutongo uyu wakapihwa zvichtevera chikumbiro cherimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, reCombined Harare Residents Association.
Zvichakadai, mapurisa akawanda ayo ari kutenderera achiona kuti mitemo yekudzivirira Coronavirus ari kuita izvi asina zvipfeko zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi.
Mumwe mugari wemuHarare, VaJeans Phiri, vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi hazvina kukokdzera vachiti mapurisa anofanirawo kuchengetedzwa kubva kuCoronavirus.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, vaudza Studio 7 kuti mukuru wemapurisa nemuhurumende vanokoshesha hutano hwemapurisa uye vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti mapurisa achengetedzwe kubva kuCoronavirus.
Vati pane zvekuchengetedza mapurisa zvakaita semaMask zvavakawana asi vakati hazvina kukwanira mapurisa ese uye pane hurongwa kwekuti mapurisa ese awane zvipfeko izvi nezvimwe zvekushandisa nekuadzivirira kuti asabate Coronavirus apo anenge ari pabasa.
VaNyathi vazivisawo kuti kusvika pari zvino vasunga vanhu mazana mana nemakumi masere nevashanu vakatyora mutemo weLockdown.
Vati vazhinji vavo vanhu vaivhura mabhawa kana kutengesa hwahwa zviri kunze kwemutemo.
Veruzhinji vari kuchema chemawo kuti vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvakanyanya panguva ino uye vanoda kuti hurumende irange vanhu ava.
Zimbabwe yakaita chisungo chekuti vanhu vambogara kudzimwa dzavo kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kwehutachiwana hweCoronavirus.
Coronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvisere pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe.
Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevana vakaongorora kuti vane chirwere ichi, uye vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vasina chirwere ichi.